China Imisetyenzana emithathu yokuhlamba intloko yabenzi kunye nabathengisi | Chengpai
Inombolo yomzekelo Inkcazo: CP-3T-RQ01
Ukufakwa Udonga lunyuswe
Intloko yeshawari ephathwa ngesandla 304 insimbi, nesilicon
Umbhobho wokuhlamba ngesandla 304 insimbi, iplastiki
Ubunzima bomnatha (kgs) 7.90
Gross Ubunzima (kgs) 8.50
Izibane ze-LED zibandakanyiwe HAYI
1.Ultra ibhityile, 2mm ubukhulu.
2.Ukwakha okuqinileyo kwe-304 insimbi engenasici.
3.Easy ecocekileyo. Imilomo eyiSlicon inokucinywa ngokukhawuleza.
Iipatheni ezine zokutshiza: imvula ephezulu, ingxangxasi, ishawa ebanjwa ngesandla.
Esi seti sishawa sixande siphezulu sendawo yokuhlambela efanelekileyo kwaye ilungile kumagumbi okuhlambela. Ihambisa ukuhamba ngamandla kunye neepateni ezintathu zokutshiza, ingxangxasi, imvula ephezulu kunye neshawa. Yongeza ubungakanani obutsha ekuhlambeni kwakho, efakwe eludongeni lweshawari yakho, amanzi ahlaziyayo asasazwa kuwo wonke umzimba wakho ngokusebenzisa ukutshiza kwawo okubanzi.
Intloko yeshawari ilinganisa ama-560 x 230 mm, eqinisekisa ukuzonwabisa okukhulu. Ngomjikelo wayo omncinci kunye nomngxunya ococekileyo we-chrome, ikongeza nefuthe langoku kwigumbi lokuhlambela.
Olu lwakhiwo lweshawa yemvula lunzima nge-304 yentsimbi engenasici, yomelele ngokuchasene nomhlwa. Umphezulu ogqityiweyo we-chrome wenza ukuba intloko yeshawari ibe ntle kwaye yomdlalo omangalisayo ngayo nayiphi na into yokuhombisa yangasese.
Isandla sasiphethe intloko yeshawa kunye ne-150cm hose ebonelelwe ngakumbi. Ukuhlamba abantwana okanye abantu abadala kusenokwenzeka ingxaki. Hayi kangako ngesandla ebambe intloko ishawa. Isepha inokucocwa ngokulula.
Ukwenza ukucoca kube lula, imilomo ye-silicone eguquguqukayo ibekwe kwi-aerator yeshawari engaphezulu kunye neshawa ngesandla. I-silicone ekumgangatho ophezulu, enganyangekiyo neinyembezi kulula ukuyithambisa usebenzisa iminwe yakho. I-Limescale kunye nokungcola kuyanyamalala ngokungathi ngomlingo, kwaye uyaxhamla kumava e-jet otshisayo rhoqo. Isitshizi esihle sokuhlambela xa uhlamba kunye nokuhamba kwamanzi xa uhlamba izandla kwenza ukuba ezi mveliso zikunandiphe ukuzisebenzisa.
Ivalufa yeshawari enezibambo ezibini yenziwe ngentsimbi eqinileyo engenamatshini engama-304, yomelele kwaye yomelele, ayisoze ivuze. Iqhosha lolawulo kukusebenza ngokulula, okwenza ishawa ithambe kwaye ibenokunandipha ngakumbi kwaye ishiye ulusu olumnandi kulusu lwakho. Itoni yomphefumlo kwi-spa yakho yobuqu.
Iseti yeshawari ibandakanya ishawa yentloko, ishawa yokuphilisa ngesandla kunye nevalve yolawulo. Kuyinto eludongeni imvelaphi inyuselwa khona kunye nofakelo olulula njengoyilo lwayo olulula.
Egqithileyo Iphaneli yokuhlamba ekhazimlisiweyo Umsebenzi wodonga unyuswe
Okulandelayo: Intloko yeshawari yesilayidi esineSlim encinci
Intloko yeshawa yesikwere efihliweyo ye-LED
Ishawa kunye nemvula entloko
I-engile yasekunene enobushushu obubonakalisiweyo ...
Umsebenzi omnye wokuhlamba impahla faucet yentsimbi